Otu esi eme nkwado ndabere nke ekwentị gị | Akụkọ akụrụngwa
Otu esi eme nkwado ndabere nke ekwentị gị
Otu n'ime isiokwu ndị a ga-achọ n'ụlọ akwụkwọ, ọkachasị ugbu a nke ọtụtụ ihe ọmụma dị na dijitalụ kwesịrị Ndabere. The ndabere bụ ihe anyị na-eche mgbe niile ime ma na nke dị iche iche ihe, ọtụtụ ndị ọrụ na-eme ma na-akwa ụta mgbe ha hapụ ha data.
Ọtụtụ n'ime anyị na-eji ekwentị mkpanaaka anyị kwa ụbọchị maka ihe niile, ma ọ bụ ịkpọ akaụntụ ụlọ akụ, zipu ozi-e, nyocha akwụkwọ, lelee netwọkụ mmekọrịta, ihu igwe ... Nke a bụ n'ihi eziokwu na teknụzụ na sistemụ ghọrọ usoro ebumnobi a. Maka ihe a niile na ndị ọzọ, ọ dị ezigbo mkpa mee nkwado ndabere nke mobile anyị mgbe niile.
Foto na vidiyo anyị na-eme na njedebe anyị bụkwa ihe hà ma ọ bụ baa uru karịa ọdịnaya ndị anyị nwere na ngwaọrụ anyị. Anyị enweghị ike ichefu WhatsApp, ngwa izi ozi kachasị eji ọ bụghị naanị ụwa, kamakwa lihe kachasị eji na ngwa ọ bụla.
Ma iOS na gam akporo hapụ anyị ka anyị mee akwụkwọ nkwado ndabere nke ọnụ anyị, nke mere na ọ bụrụ na efunahụ ya, zuo ohi ma ọ bụ kwụsị ịrụ ọrụ, anyị nwere ike iweghachite data niile na ọdụ ọ bụla ọzọ. Anyị nwekwara ike ịhọrọ, iji mee usoro ahụ ngwa ngwa, iji mee mbipụta ndabere naanị nke ozi kachasị masị anyị, nke nwere ike ịbụ ihe metụtara onyonyo na vidiyo.
1 Esi ndabere na gam akporo
1.2 Ndi ana-akpo na kalenda
1.3 Foto na vidiyo
1.4 Ndabere nke ngwaọrụ niile
1.5 Weghachi dum ngwaọrụ ndabere
2 Olee otú ndabere na iOS
2.1 Ndi ana-akpo na kalenda
2.2 Foto na vidiyo
2.4 Ndabere nke ngwaọrụ niile
2.4.1 Site na iPhone
2.4.2 Site na PC nwere Windows / macOS 10.14
2.4.3 Site na Mac na macOS 10.15 ma ọ bụ karịa
Esi ndabere na gam akporo
WhatsApp. Google na WhatsApp nwere nkwekọrịta ka ndị ọrụ nwee ike dowe ndabere WhatsApp na sava GoogleỌ bụrụ na oghere dị na ya wepụtara site na ihe anyị nwere (15 GB). Iji gosipụta oge ole anyị chọrọ ịme ndabere nke ọdịnaya niile echekwara na WhatsApp, anyị ga-enweta ya Ntọala> Mkparịta ụka> Ndabere. Nhọrọ ndị dịnụ bụ: kwa ụbọchị, kwa izu na kwa ọnwa. Usoro nnomi a ga - eme mgbe niile n'abalị mgbe ọnụahịa na - akwụ ụgwọ.
Ndi ana-akpo na kalenda
Iji nwee ike iji gam akporo ekwentị, ọ dị mkpa, ee ma ọ bụ ee, akaụntụ Gmail. Site na akaụntụ Gmail a, anyị ga-enwe nnomi nke kọntaktị abụọ na ọdụ anyị na nhọpụta na burukwa anyị, na mgbakwunye na ozi ịntanetị, ebe ọ bụ na a na-echekwa ha mgbe niile na sava Google ma ọ bụghị na ọdụ anyị. N'ihi nke a, ọ dịghị mkpa ịme nkwado ndabere nke kọntaktị ma ọ bụ kalenda, ebe ọ bụ na mgbanwe ọ bụla anyị mere na ọdụ anyị, a ga-egosipụta ya na akpaghị aka na akaụntụ Gmail anyị.
Ugbu a, ọ bụ foto. Foto Google bụ nhọrọ kachasị mma kachasị mma taa na-enye anyị ohere ịme ndabere akpaka nke foto niile na vidiyo anyị na-eji ngwaọrụ mkpanaka anyị. Ọrụ a n'efu sitere na Google na-echekwa nnomi dị elu (ọ bụghị nke mbụ) nke ihe oyiyi na vidiyo anyị niile mgbe ejikọtara ya na netwọki WiFi, yabụ na ọ dịghị mkpa ịme oge ọzọ kwa ụbọchị belụsọ na anyị chọrọ idebe nke mbụ (nke ihe dị iche anaghị achọpụta). A na-etinye ngwa a nwa afọ na gam akporo.
Ndabere nke ngwaọrụ niile
Ugbu a ị doro anya banyere otu sistemụ arụmọrụ ya na ngwa ya si arụ ọrụ na gam akporo, ị ga-enyocha ma ọ na-akwụ ụgwọ n'ezie ịhapụ oge dị mkpa iji mee ndabere. Ọ bụrụ n'ịchọghị ime ka ndụ gị sie ike ma ọ masịrị gị ndabere kpọmkwem site na ngwaọrụ gịLee usoro ị ga-eso:
Nke mbụ, anyị na-enweta ya Ntọala nke ngwaọrụ anyị ma chọọ maka menu Google.
Ọzọ, anyị na-achọ nhọrọ ahụ Mee nkwado ndabere.
N'ikpeazụ, anyị ga-emerịrị gbanye Ndabere na Google Drive ma họrọ akaụntụ nke anyị chọrọ ịchekwa data nke ọnụ anyị. Ihe data ndị a bụ:
Ngwa na data ntinye.
Ntọala ngwaọrụ (gụnyere okwuntughe Wi-Fi na ikikere)
Weghachi dum ngwaọrụ ndabere
Weghachi nkwado ndabere nke anyị mere na mbụ na gam akporo ọhụrụ anyị, anyị ga-eme họrọ a nhọrọ mgbe anyị na-amalite anyị ama ọnụ, ebe ọ bụ na site na nhọrọ nhazi gam akporo, anyị enweghị nhọrọ ahụ, naanị ya na-enye anyị ohere ịme akwụkwọ ndabere, ọ bụghị weghachite ha.
Olee otú ndabere na iOS
Mgbe ọ na-abịa ime nkwado ndabere na iOS, anyị nwere nhọrọ abụọ, n'adịghị ka gam akporo. Na otu aka, ọ bụrụ na anyị na-butere ohere na iCloud, anyị nwere ike ndabere dum ọnụ na Apple ígwé ojii. Ọ bụrụ naanị na anyị nwere 5 GB nke ọ na-enye anyị n'efu, anyị nwere ike ịchekwa otu, mekọrịta n'oge niile, nke kalenda anyị, kọntaktị, ọrụ, okwuntughe Wi-Fi, ndetu, ozi, ibe edokọbara Safari, Homelọ, Ahụike, obere akpa , Gamelọ egwuregwu na Siri.
Oghere 5 GB nke Apple na-enye anyị naanị maka iji otu n'ime ngwaọrụ ya karịrị iji chekwaa ndabere nke kọntaktị anyị niile na kalenda zuru ezu, yabụ anyị ga-emerịrị nwere ma taabụ arụ ọrụ n'ime nhọrọ iCloud.
Ọ bụrụ na anyị abanyela ohere na iCloud, foto niile na vidiyo niile anyị were na ngwaọrụ anyị, na-akpaghị aka na-ebubata na igwe ojii Apple na mkpebi mbụ ya. Ọ bụrụ na anyị enwetaghị ohere nchekwa na igwe ojii (5 GB n'efu bụ nke pere mpe), nhọrọ kachasị mma ịnwe nnomi ọdịnaya ahụ bụ iji Foto Google.
Foto Google, dị ka ụdị maka gam akporo, na-akpaghị aka bulite a elu-edu oyiri nke foto na vidiyo niile anyị na-ewere na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod touch, ya mere, ọ dịghị mkpa ịmekwu akwụkwọ ọ gwụla ma anyị chọrọ idebe ha na mkpebi mbụ ha.
Ndabere na WhatsApp Ọ na-ejedebe na ebe nchekwa anyị nwere na iCloud. Ọ bụrụ na ohere anyị nwere pere mpe, anyị ga-edozi WhatsApp ka ndabere ọ na-eme ghara ịgụnye foto ma ọ bụ vidiyo, ebe ọ bụ na a gaghị eme nkwado ndabere na anyị agaghị enwe ike iweghachi mkparịta ụka ọ bụla anyị nwere ugbu a.
Site na iPhone
Iji nwee ike ime ndabere site na iPhone n'onwe ya, naanị nhọrọ bụ ịnweta ohere nchekwa na igwe ojii. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe gị, ị ga-emerịrị usoro ndị a:
Anyị na-enweta Ntọala
N'ime Ntọala, pịa iCloud.
N'ikpeazụ, anyị na-achọ nhọrọ ahụ Detuo oyiri anyị wee rụọ ọrụ ngbanwe ahụ.
para weghachite ndabere, anyị dị nwere ezipụta ya mgbe mbụ anyị na-amalite iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka ebe anyị chọrọ iji weghachi niile data na anyị echekwara na iCloud ndabere.
Site na PC nwere Windows / macOS 10.14
Ọ bụrụ na anyị enweghị ohere na iCloud ma anyị enweghị atụmatụ ịkpọ ya, anyị nwere ike ịme ndabere ndabere nke iPhone, iPad ma ọ bụ iPod touch na kọmputa anyị. Usoro ịkwado na Mac, dabere na ụdị nke sistemụ arụmọrụDị ka ọ dị na macOS 10.15, Apple wepụrụ iTunes na sistemụ ahụ.
Ọ bụrụ na Windows jikwaa kọmputa gị ma ọ bụ macOS 10.14 ma ọ bụ obere, anyị ga-eji iTunes ime nkwado ndabere. Ozugbo anyị meghere iTunes, anyị ga-ejikọrịrị ngwaọrụ anyị wee pịa akara ngosi na-anọchite anya ha nke egosiri na ngwa ahụ.
Na-esote, na kọlụm aka ekpe, pịa Gbanwee na n'akụkụ aka nri, anyị na-akanye akara na igbe ahụ Kọmputa an'ime Ndabere. Iji malite nkwado ndabere, anyị ga-pịa bọtịnụ ahụ Mee otu oyiri ugbu a.
Site na Mac na macOS 10.15 ma ọ bụ karịa
Site na macOS 10.15, iTunes abughizi ngwa n'ime ihe ndi ozo, ma anyi ka nwere ike iga n'ihu ime nkwado ndabere nke iPhone, iPad ma obu iPod touch. Anyị kwesịrị jikọọ ngwaọrụ anyị na Mac ma mepee Finder, site na ịhọrọ ngwaọrụ anyị chọrọ ndabere.
Na akụkụ aka nri nke Onye Finder, ihe dịka nhọrọ ndị iTunes nyere anyị ga-egosi. Naanị anyị ga-aga Backups ma lelee igbe ahụ Ndabere niile iPhone data a Mac. N'ikpeazụ, anyị ga-pịa Back elu ugbu a na-amalite usoro.
Usoro ime nkwado ndabere na Mac na Windows ga-adabere na ọnụọgụ data nke ọdụ anyị nwere. N'adịghị ka nkwado ndabere anyị nwere ike ime na gam akporo, nke anyị na-eme na iPhone, iPad na iPod touch azọpụta data nke ọ bụla dị na oge ahụ na ngwaọrụ ahụ, gụnyere onyonyo na vidiyo, n'agbanyeghị ma anyị jiri Google Foto debe otu nnomi foto na vidiyo anyị na igwe ojii Google.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Otu esi eme nkwado ndabere nke ekwentị gị
Etu ị ga - esi mara ma eziri WiFi m na gam akporo